🥇 ▷ Gears 5 wuxuu imaadaa iyadoo loo habeeyay qalabka 'AMD': waxaa kujira AMD FidelityFX ✅
Gears 5 wuxuu imaadaa iyadoo loo habeeyay qalabka ‘AMD’: waxaa kujira AMD FidelityFX
Imaatinka mid ka mid ah gantaalada aaladaha Microsoft, Gears 5, waa dhow. Cinwaanka ayaa jiri doona Sebtember 10 loogu talagalay Xbox One iyo PC, sidoo kale wuxuu ku saabsan yahay Steam markii ugu horreysay wareejinta. Haddii aad ka mid tahay kuwa aan sugi karin muddadaas dheer, oo aad la socoto ‘Xbox Game Pass Ultimate’ ama ‘Ultimate Edition’ waad ciyaari kartaa 4 maalmood kahor, Sebtember 6.
Kahor intaan la bilaabin, Soosaarayaasha Isbaheysiga ayaa horey u shaaciyey waxa uu noqonayo shuruudaha nooca PC-ga, iyo, intaa waxaa dheer, taxane gaar ah oo si gaar ah loogu talagalay oo loogu talagalay gaar ahaan qalabka ‘AMD’.
Xisaabinta Asynchronous: Waxay u ogolaataa Radeon GPUs inay ku qabtaan howlo badan isla waqti isku mid ah. Awooda GP-ga ee wajiyada badan leh waxay u oggolaaneysaa qeybinta hufan ee waxqabadka muuqaalka iyo muuqaalka jaantusyada, taas oo micnaheedu yahay mid weyn xirasho.
Burburinta amarro laba waji leh: Wuxuu hubiyaa in tilmaamaha processor-ka AMD Ryzen uu si dhakhso leh ugu gaaro kaarka Radeon ee waxqabadka wanaagsan, garaafyada fiican iyo daahitaanka oo yaraada.
AMD FidelityFX (soosocda goor dhaw): Cusboonaysiin ku imaan doonta ka dib bilaabista, Gears 5 wuxuu ku dari doonaa taageerada AMD FidelityFX, oo soo bandhigi doonta shaandheyn firfircoon oo firfircoon taasoo soo saareysa faahfaahinta aagagga kala hooseeya ee waayo-aragnimada ciyaaraha jilicsan. Waxay bixisaa horumar ku saabsan caddeynta muuqaalka, kana hortagaya waxa jilicsan ee ay sababaan saameynta kale ee hawsha ka dambeysa.
Gears 5 wuxuu umuuqdaa xitaa si kafiican AMD
Agaasimaha farsamada isbahaysiga Mike Rayner ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay:
AMD iyo Isbahaysigu waxay leeyihiin xiriir adag ilaa Gears of War 4 waxaanan sii wadaynaa inaan ku darno tiknolojiyad cusub oo naga caawisa hagaajinta waxqabadka ciyaarta. Waxaan u dhaqaaqnay ku dhowaad dhammaan geedi socodkeenna geedi socodka shaqeynta Async Compute ee Gears 5, taasoo tarjumeysa si ka sii wanaagsan Heerka jir marka loo eego horyaalkeenii hore, marka lagu daro meela badan oo lagu kasbado xitaa tayo sare oo garaaf ah. Injineerada AMD ayaa nagala shaqeeyey sidii aan u tayayn lahayn wax walba oo ka socda CPU ilaa GPU, waxaana rajeyneynaa inaan ku soo bandhigno wax qabadkan cajiibka ah iyo muuqaallada wanaagsan gacmaheena.
Nooca PC-ga ayaa soo bandhigi doona in ka badan 35 qaabab naqshadeyn oo si buuxda loo beddeli karoAstaamaha kale waxaa ka mid ah taageerada HDR iyo Dolby Atmos, marka lagu daro taageerada 21: 9 iyo 32: 9.
Si aad afkaaga u furatid waxaad arki kartaa sida Terminator’s T-800 uu ugu duulayo milkiilaha Gears 5-kaan, oo u horseedaya tan burburin.